Otu Stopgba mmiri na-egwu mmiri - nnukwu ọdọ mmiri
Ihe Anyị Pụrụ Ime Maka Gị
GREATPOOL na-enye oru di iche iche nke oru di iche iche site na enyemaka zuru oke maka imewe, akụrụngwa akụrụngwa na enyemaka teknụzụ. Anyị ahụmahụ otu ekwe ka anyị na-enye a na-enye a dum ngwọta na ọdọ mmiri imewe, mwube, post-ewu, ngwá echichi na arụmọrụ nhazi, oru ngo bidding na tupu imewe ọrụ.
Gwa GREATPOOL gbasara mkpa gi
Na-enye aka na nhọta nke akụrụngwa na sistemụ na-akwado ibe gị maka ọrụ ọdọ mmiri gị
Igwu mmiri na-ewu nkwado teknụzụ
Na-ahọpụta nri aghụghọ, usoro na-ewu ụzọ bụ ihe anyị nwere ike ime n'ihi na ị ọdọ mmiri oru ngo!
E dechara ọdọ mmiri ngwọta maka gị
Ọ bụrụ na ịhọrọ GREATPOOL, Echiche gị na ebumnuche gị bụ otu ndị otu anyị ga-esi arụ ọrụ.
N'ime afọ 25 gara aga, anyị enwetawo ọgaranya ahụmahụ na n'ichepụta nke igwu mmiri akụrụngwa na teknuzu ahụmahụ ọdọ mmiri oru ngo. Dabere na eserese ụkpụrụ ụlọ ị na-eziga, anyị na-enye otu nkwụsị nkwụsị maka imepụta miri emi nke ọdọ mmiri, akụrụngwa na-akwado na ntinye teknụzụ. Kwe ka ị rụọ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma wuo ebe igwu mmiri na ndị masons, plumbers, wdg, ma na-ebelata ebe a na-egwu mmiri.
Nzọụkwụ Iji Mejuputa A Pool Service
Ntụpụ ụkwụ 1: Send gị ụkpụrụ ụlọ imewe Eserese anyị
Exchangegbanwe echiche dị mkpa. Azịza gị ga - enyere anyị aka ịmata ihe ị chọrọ na agụụ gị maka ọrụ ọdọ mmiri gị.
Anyị na-arịọ gị ka ị zitere anyị atụmatụ nke saịtị ahụ, yana foto nke saịtị ahụ na echiche ala na ụlọ. Mgbe nke a gasịrị, anyị ga-ezitere gị nkọwa zuru ezu maka imekọ ihe ọnụ na ụgwọ ụgwọ anyị.
Ntụpụ ụkwụ 2: Anyị ga-eme ka metụtara ọdọ mmiri drwings gị
Pipeline na-etinye ihe osise
Na atụmatụ ala nke ọdọ mmiri ahụ, anyị ga-ama akara ngwa dị iche iche nke ọdọ mmiri ahụ na nhazi pipeline dị iche iche nke ime ụlọ igwe n'ụzọ zuru ezu.
Nhazi ụlọ akụrụngwa
Nke a bụ isi nke nwụnye gị. Ihe ntinye echichi dika oke igwe nke igwe na-egosi pipụ, valvụ dị mkpa na akụrụngwa dị n'ime ụlọ igwe. A na-enye valves ndị dị mkpa ma gosipụta ọnọdụ ha nke ọma. Plumbers naanị kwesịrị ịrụ ụlọ na ntinye dị ka eserese ahụ.
Ma anyị nyere mbido mbụ ma ọ bụ rụọ ọrụ na echiche ndị dị ugbu a, GREATPOOL na-enye ọrụ na-enweghị atụ, nke ga-azọpụta oge na ego gị.
Ntụpụ ụkwụ 3: Anyị nwere ike ịnye akụrụngwa ndepụta aha na nkwupụta
Nhazi akụrụngwa Pool
Maka ọnọdụ a kapịrị ọnụ nke mpaghara ọ bụla, anyị ga-enye ndepụta nke akụrụngwa kachasị adaba maka mpaghara mpaghara ma dabere na nchebe gburugburu ebe obibi, nchekwa ọkụ, na ọnụ ahịa.
Ọdọ mmiri Pool Systems
Anyị bụ ndị nrụpụta akụrụngwa ma nwee uru ọnụahịa nke ngwaahịa dị elu nke ndị ọrụ ngo mpaghara enweghị.
STEP4: Anyị nwere ike inye gị nduzi na ntinye ọrụ ntanetị
Ndị otu anyị nwere ndị njikwa ọrụ nwere ihe karịrị afọ 18 nke ahụmịhe ụlọ iji soro ọrụ ahụ wee nye nduzi ọrụaka
Ajụjụ gbasara ọrụ igwu mmiri
Kedu ihe ịchọrọ iji chọpụta ego ị ga-eri?
Mgbe anyị mechara kọntaktị mbụ, anyị na-arịọ gị ka ị zitere anyị map nke ala nke ala ahụ ma, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, foto nke ebe obibi gị, ala na ọdọ mmiri. Ikwesiri ikwenye nha na nguzo miri achọrọ na nhọrọ ị chọrọ. N'ime awa 72, anyị ga-ezitere gị email na-akọwa ọrụ ọ bụla na ego ole anyị kwụrụ.
Kedu ọrụ ndị anyị nwere ike ịnye?
Anyị nwere ike inye ọdọ mmiri imewe Eserese, ọdọ mmiri akụrụngwa ọkọnọ, echichi oru nduzi.
Kwesịrị ịnakwere ọrụ anyị niile?
Ọ dịghị ma ọlị. Anyị ọrụ: imewe Eserese. Ndepụta akụrụngwa. Ntuziaka Ntuziaka Ntuziaka. Dịka mkpa gị, ị nwere ike họrọ naanị gị achọrọ.
Ogologo oge ole ka ọ ga - ewe iji mezuo nhazi ahụ?
N'ezie nke a dabere na oke ọrụ anyị, mana oge etiti oge bụ 10 ruo ụbọchị 20 mgbe anyị nwetasịrị nkwenye gị maka atụmatụ echiche ahụ.
Ọ bụrụ na mmemme mmemme afọ ojuju, gịnị ka m ga - eme?
Ihe osise anyị na-enye gị ohere ịme ọdọ mmiri naanị ma ọ bụ ndị omenkà. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ, ndị ọrụ aka anyị nwere ike ịga saịtị ahụ iji duzie ntinye nke akụrụngwa.
ebee ka m ga azụrụ ngwa na akụrụngwa?
Dị ka eserese anyị si kwuo, anyị ga-enye gị ndepụta nke ihe nzacha na akụrụngwa. N'otu oge ahụ, anyị ga-enye gị nkọwa nke akụrụngwa anyị. I nwekwara ike zụta ya na mpaghara gị. Nhọrọ a bụ nke gị
esi chọta ndị ọrụ?
Anyị nwere ike inyere aka kpọtụrụ ndị ọrụ nọ n'ógbè gị, jụọ ha maka nkwupụta dịka atụmatụ atụmatụ ahụ siri dị, ma zitere gị ndụmọdụ ha mgbe ị nyochachara nkwupụta ahụ. Ma nke ikpeazụ bụ nke gị.
Igha mmiri nke Ọha, Igwu Pool Ngwọta, Rooftop Pool Ngwa, Ọrụ Igba mmiri, Igwu Mmiri Pool, Igwu Ulo Okpu,